Talooyin ku saabsan dabaysha dabada | Ragga Stylish
para futada ka xiir Adigoon naftaada dhaawicin isla markaana aan daryeelin caafimaadka maqaarka, waa in la isticmaalaa wax. Nidaamkan waxaa lagu samayn karaa guriga guutooyin shamac qabaw ama wax diirran, laakiin waxaa lagugula talinayaa inuu kaa caawiyo qof kaa caawin doona inaad wax ku simaato meesha aad rabto. Qaab kale oo loo sameeyo waa inaad iska caawiso muraayad muujineysa aagga, in kastoo ay adkaan doonto in la helo natiijooyinka la doonayo.
Shaki la'aan, ikhtiyaarka ugu badan ee lagula taliyay in futada wax looga barto ayaa ah in la aado a Xarunta Qurxinta ama xirfadle. Ha iloobin in badhida iyo gaar ahaan futada ay tahay meel aad xasaasi u ah oo aan lugaha loo xiiri karin sida lugaha oo kale.
1 Sawir qaadid
2 Daaweynta laser-ka
Mid ka mid ah waxyaabaha kale ee loo isticmaali karo in futada laga sifeeyo ayaa ah sawir qaadid. Qaabkan looga saarayo timaha wuxuu ka kooban yahay qalab iftiin garaacaya oo tamarta u gudbiya timaha, dhaliyana kuleyl ku dhamaada burburka timaha.
Nooca timo saarista waxaa muhiim ah in la ogaado in haddii sawir-qaade la doorto, tirada kal-fadhiyada ay ku kala duwan yihiin iyadoo ku xiran qofka, laakiin natiijooyinka tan daaweynta Iyagu waa kuwo cajiib ah maxaa yeelay waa suurtagal in laga takhaluso inta u dhexeysa boqolkiiba 70 iyo 80 boqolkiiba timaha aagga lagu daweeyay.
Sida ikhtiyaarka saddexaad iyo kan ugu dambeeya, waxaan kugula talineynaa timo ka saarista laser. Farsamadan casriga ahi waxay u oggolaaneysaa in si joogto ah looga saaro timaha, iyadoo la yareynayo xaddiga aagga la daweeyey boqolkiiba 80.
Ka mid ah faa'iidooyinka ka saarista timaha laser-ka, waxay u muuqataa inay tahay nooc daaweyn ah oo ku habboon dhammaan noocyada maqaarka, taasna waxaa loo isticmaali karaa meel kasta oo jidhka ah, xitaa futada.
Si tan loo sameeyo daaweynta quruxda, Waxaa lagugula talinayaa inaad tagto xarun ku takhasustay noocan timo saarista halkaas oo shaqaaluhu ku wargeliyaan tirada kal-fadhiyada jirku u baahan yahay, hufnaan daaweynta iyo tillaabooyinka la raacayo ka hor iyo ka dib marka la nuugo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Talooyin ku saabsan dabaysha futada